Kanye ukusebenza kwezimali kanye nokusebenza omakhalekhukhwini nezimfuno anda amabhethri. ibhethri ejwayelekile uyakwazi ukuhlinzeka ukusebenza idivayisi izinsuku 2-3, kodwa uma ukusebenza kuhilela asebenzayo ukuxhumana nomphakathi, ukusetshenziswa multimedia amathuluzi, kanye izingcingo njalo, ukudedelwa olulindelekile kungenzeka emahoreni ambalwa alandelayo. Futhi ukuba baphathe idivayisi ukushaja akuyona njalo elula - akusiyo kuphela isidingo ukuthola esidayisa amthandayo, kodwa futhi okunamathiselwe ku-ke njengoba enjalo. Isixazululo elilungile kuya inkinga kungaba ibhethri ephathekayo omakhalekhukhwini, olubizwa nangokuthi Amandla Bank. Lezi sekeli futhi ukuletha ezinye izinkinga, kodwa nabo umsebenzisi namanje uthola ezinye ukuzimela.
At ukwazana lokuqala ne izici zaryadok zangaphandle umsebenzisi ongenalwazi umxhwele umthamo omkhulu we mishini. Ngokwesibonelo, kukhona onobuhle onengubo ivolumu 10.400 mah. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi lokhu arsenal kwanele 5 amaseshini ashona umakhalekhukhwini, okubandakanya ibhethri 2000 mah. Empeleni, konke ngakho ayilula kangako. Iqiniso lokuthi ibhethri laptop ukuze ifoni has a amandla silinganisele ka 3.7 watts. Futhi, omakhalekhukhwini basolwa 5 V Lokhu umehluko kuholela ekulahlekelweni inani ezingaba amandla afika ku 30%. Futhi endabeni engcono, njengoba onobuhle Chinese ezishibhile, futhi ayinikeze ezingaphezu kwesigamu umthamo yamemezela.
Kodwa kusadingeka uzulazule yonke idatha esemthethweni - konke kuncike brand ye umenzi, esekelwe ukuthembeka okumele bayowenza umthamo wangempela wamandla. By endleleni, uma ibhethri laptop ukuze ifoni kuthengwa ngenjongo ukunakekelwa eziphuthumayo futhi kudivayisi yesondlo isikhathi esifushane, isidingo umthamo omkhulu futhi akukho muntu ongathi gcina compact kodwa eliphezulu nezesekeli okuthembekile.
Sekuyisikhathi eside iningi abasebenzisi mobile sincike kwamandla, izinga ukushaja olungasho okuthile futhi umkhiqizo rate. Lesi sici kunqunywa umfutho zamanje, ulinganiswa amperes (A). Ngokuvamile izingcingo amafoni smart icala 1A futhi kudinga ukuba bazikhandle kakhudlwana amapuleti 2A. Lezi zinombolo futhi kufanele okubhekiswe lapho ekhetha ibhethri laptop. Amandla Bank ngenhlanhla ungase unikezwe okukhiphayo ezimbili - 1A kanye 2A. Ngokuvamile, umfuziselo okunjalo futhi inani ehloniphekile - hhayi ngaphansi kuka 7800 mah. Lezi amadivayisi Yiqiniso, ezibizayo, ngakho-ke kungenzeka ukuthi wacabanga Usebenzisa ibhethri yangaphandle nge okukhipha olulodwa ukusevisa kumadivayisi amaningi. Kodwa lokhu isixazululo kuzokuhlupha futhi okuyingozi, ngoba ayifani ngokuya eziyingozi njengamanje efonini yakho. Futhi lokho ingasaphathwa yokuthi inqubo ukushaja kakhulu ngeke kuthathe isikhathi eside esimweni tablet.
Ukuthenga Amandla Bank ngaphandle ibhethri
Ukuze izindleko ukonga kakhulu ukuncoma ukuthenga eceleni icala Amandla Bank nebhethri. Lokhu okuhlukile kunenzuzo ngenxa yokuthi original ungaqiniseka e nokwethenjelwa ibhethri izici. Ngakwelinye ihlangothi, Amandla Bank kuphela njengesithiyo igobolondo ibhethri enikeza ukuxhumana nefoni. Nokho, zikhona yokuntula leso sinqumo. Iqiniso lokuthi ibhethri laptop ukuze ifoni kulokhu ukusebenza ababuthaka amperage naphumayo. Ngenxa yalokho, kuba khona isidingo futhi isikhathi esiningi ukushaja. Ngakolunye uhlangothi, umnikazi uzokwazi ukushintsha ibhethri komunye, ebe egcina eziyisisekelo Amandla Bank.
Ngaphezu kokukodwa waqaphela ukuthi kwakubalulekile ukuba izinga idivayisi ukushaja. Ngezindlela eziningi, ukuthembeka, ukuqina nokusebenza zangaphandle segezi zinqunywa ngumkhiqizi. Ngokusho kochwepheshe, ukuqiniseka enkulu kubangele onobuhle Korean kusukela LG Samsung. Ngokuvamile nabathengisi ungangifihleli amabhethri okuqondene le mikhiqizo. Uma umenzi kophawu aluboniswa, noma kubonakala inkampani elaziwayo elincane, kungcono ukuba ayiyeke le ithengwe. Futhi kokukhuluma kuwufanele nomkhiqizi onguchwepheshe ukuthuthukiswa amadivayisi ezinjalo. Ungakhetha ngokuphepha ibhethri ephathekayo zangaphandle ezivela Melkco imigqa, YooBao noma Momax. Njengoba amanani, abasakwazi kufinyeleleke umsebenzisi isilinganiso iselula yesimanje. Amamodeli ephethe namandla 10,000 mah ngokuvamile abiza ayizinkulungwane 1,5-2. Hlikihla. Ngokuthenga inketho phezu 5000 mah ikani futhi enza ukuhlangabezana 1 ayizinkulungwane. Deda. Futhi lezi amanani, ngasendleleni, ubheke amamodeli we umsuka yenkampani.
Izibuyekezo amabhethri yangaphandle
Naphezu kweqiniso lokuthi abasebenzisi kumadivayisi eselula yesimanje ukusebenzisa 2-3 izesekeli Akuphoqelekile ngoba Ergonomics ekubambeni ngezikhalo ukushaja zangaphandle kakade akuyona kakhulu. Lapha-ke kufanele kuqashelwe, futhi amaningi, uquketheni lowo abakhiqizi ngokwabo, anikeza idivayisi design stylish futhi interface yomsebenzisi-friendly. Kodwa kukhona ukugxekwa ubungako bamandla lecinisekisa ibhethri laptop. Izibuyekezo ngokuvamile phawula nokungahambisani phakathi izinkomba langempela kushiwo. Kodwa njengoba kuphawuliwe ekuqaleni, idatha ezisemthethweni kufanele siqondiswe kuphela ukulungiswa okubangelwa umehluko voltages.
Prakthiza yokusetshenziswa lesikhomba ishaja zangaphandle kwenza ukuphila kube lula ukuze abantu umatasa. Amadivayisi anjalo zizimele kusuka lapho uphuma khona futhi zidinga kuphela uxhumano igajethi target. Ngokuya ukusebenza Yiqiniso, okuningi kuncike umenzi. Ngokwesibonelo, ifoni ephathekayo kusukela ibhethri Xiaomi Mi amandla 10.400 mah ukwazi ukuze akhulule oyisebenzisayo kusukela amapayipi smartphone usesho ngeviki phakathi isimo yokusebenza esebenzayo. Amadivayisi anjalo zinhle futhi lezo anosayizi nesizotha kanye nomklamo stylish - ngisho imigqa isabelomali equkethe version nge ukubukeka yokuqala. Mhlawumbe ongakhetha ezikhanga kakhulu kule ndaba kuhluke aluminium nobukhulu bezinhlamvu, onikeza umshini ukubukeka okuqinile futhi ivikela okuqukethwe emathonyeni angaphandle.
Isiko yokukhuluma. Indlela wokuliqonda, futhi kungani kudingeka
Iphethini ithoyizi soft: Bear